Nhau - Kupemberera Noushamwari 30th Anniversary yeWeibo Electrical Isolate Transducer
Noushamwari Kupemberera 30th Anniversary yeWeibo Electrical Isolate Transducer
Musi waGumiguru 18, kambani yeWeibo yakoka mapurofesa kubva kuNational University of Defense Technology, nyanzvi muindasitiri yekushandisa uye vazhinji vanobatana navo mubato kuti vatore chikamu mukupemberera makore makumi matatu weWeibo Electrical Isolate Transducer.
VaZhou Yong, sachigaro weMianyang Weibo Electronic Co, Ltd., vanopa hurukuro yekugamuchira. Anopa kutenda kukuru kuna VaRuan Ciyuan, muvambi wemagetsi ekuzviparadzanisa transducer nerubatsiro rwake kukambani. Anosimbisa mweya wekurwa uye asingatombokanganwi moyo pasi pehutungamiriri hwamaneja mukuru Li Dong uye anoratidza kutarisira uye kuvimba kweramangwana rekambani yeWeibo.
VaRuan Ciyuan, muvambi wemagetsi ekuparadzanisa mutengesi, anoongorora nhoroondo yekuzvarwa uye yehondo yeWeibo magetsi ekuzviparadzanisa transducer uye anoratidza kutenda kune vamwe uye vatungamiriri vakashanda pamwechete. Mr. Li Dong, maneja mukuru anopa kutaura kwake kuratidza mafungire ehunyanzvi uye kurwira kwe Weibo kambani, vanopfuura Weibo ramangwana rekusimudzira nhungamiro uye domain mission uye vanoshuvira kuti Weibo kambani ichave ine simba uye izere nebasa uye simba nerubatsiro rwe vese vanotora chikamu.
Yakamira pamakumi matatu, iyo Weibo simba sensor yakapfuura nemakwikwi anotyisa mumusika, uye yapfuura nekunyaradzwa zvinyoro nyowani yekuchinja kwenyika mamhepo; yakamira pa30, ichi ndicho chakanakira iyo Weibo simba sensor ichakamira; yakamira pa30, iyo Weibo simba sensor Kutenda kune rakaoma basa reWeibo vanhu, iyo sensor ichiri izere nesimba uye ichiri kuenderera kumberi. Iko kutenda kwevanhu veWeibo kutanga bhizinesi zvakare uye kusimuka zvakare. Ndiro simba rinotyaira revanhu veWeibo kuti vachengete zvishuwo zvavo zvekutanga uye vafambire mberi. Weibo achaenda kuburikidza nemakumi matatu emakore imwe mushure meimwe. Lizhi Nian anotaura nezvekuona, achitungamira hunyanzvi munguva yakapfuura. Forge kumberi uye kusimuka zvakare kutsvaga chitsauko chitsva chekupemberera Gore Idzva.
Post nguva: Aug-01-2020
Horo Mhedzisiro Ino Sensor, Yakaderera Simba Kudya Dc Yazvino Sensor, Horo Mhedzisiro Ac Yemazvino Sensor, Horo Yemazuva Ano Sensor, Yakakwira Kurongeka Ac Ino Sensor, Voltage Yazvino Sensor,